Kaarka lacag-bixinta ee google-ga oo bilaash ah | Google wuxuu cayaaraa koodhadhka kaararka hadiyadeedka?
Home // blog // Kaarka lacag-bixinta google-ga oo bilaash ah
Helitaanka kaarka lacag-bixinta Google-ka oo bilaash ah waa sida dib loo furo jacaylka lumay. Nasiib darro, kaadhadhka hadiyadeed ee Google oo bilaash ah ma soo bandhigi doonaan; waa inaad raadisaa iyaga. Haddii aad sidan oo kale u socotay, adiguna waad nasiibaysaa maanta. Waxa aan kuu hayno miiska waa dahab saafi ah. Haa, waxaan helnay waddadayada si bilaash ah Gaariga code-yada Google U aamina ama ha ahaato, dadaal weyn oo farsamo-feste ah oo horseeday helitaankan. Ma ahan socod ku lug leh baarkin kasta. Sidaa daraadeed, xir suumankaaga suunka ah iyo hel daankagaaga diyaarka ah sababta oo ah waxaanu ku siinaynaa macluumaad yar oo kaa farxin kara ilaa dhimasho. Sida horay loo yiraahdo, waxaan kuu ogolaaneynaa inaad la kulanto a soo saaraha kaararka hadiyado taasi waxay ku jiri doontaa xusuustaada muddo dheer.
Waa maxay a Calaamad saaraha gaaska Google?
Kuwa aan ogayn, Google kaararka kubadda hadiyaddu waa sida kan-diiriya dhamaan kaararka ku yaala meelaheeda. Waxaad kaadhadhka ka iibin kartaa dukaanka Google Play-ka ugu dambeeyay, barnaamijyada, filimada, buugaagta, iyo waxyaabaha kale ee badan. Maadaama ay kaarka hadiyaddu aanay haysan taariikh taariikhda dhicitaanka, waxaad isku daaweyn kartaa meel kasta iyo waqti kasta oo aad tagto. Dabcan, waxaa si ballaaran loo iibiyaa dukaamada qoryaha iyo bakhaarada iyo meelo kale. Laakiin, ciddii dooneysa inay iska xiirto dusha sare ee markaad hesho lacag la'aan. Halkan waa meesha aan ku soo galno sawirka. Sidii hore loo soo sheegay, waxaan ku guuleysanay guusha si aan u ogaano a Gaariga code-yada Google taas oo aan uga baahnayn mishiinka boorsadaada. Adigoo aan qoob-ka-ciyaarin, aan kula soo socodsiineyno showstopper ee boostadan.
Generator waa geesiga digital ee the rikoodhka code-ka ee Google-ka oo bilaash ah meel. Sida aad hore u qiyaastay, waxa ay asal ahaan u shaqeynayaan waxay tahay in ay kaararkooda ku bixiyaan kaadhadhka loo yaqaan 'gift card' ee Google oo dhan. Marka la baaro, waxay bixisaa kaarka lacag-bixinta Google-ka oo bilaash ah iyada oo aan la bixinin baqshiinka xayeysiinta ama wax kale oo ka mid ah dabeecadaha isku midka ah. Awoodda koronto-dhaliyuhu wuxuu ku dhexyaal yahay si sahlan oo loo adeegsado. Isticmaaluhu wuxuu ubaahan yahay inuu booqdo goobta, dooro ikhtiyaarka kaadhka hadiyadeed ee la doonayo oo riix badhanka dhalida si aad u hesho hadiyad lacag la'aan ah. Ma haysanno shahaadad jilicsan ama asal ah oo ku saabsan tiknoolajiyada si aan kuu sheegno farsamooyinka gudaha ee koronto-dhaliyaha. Laakiin, waan ognahay in tan Gaariga code-yada Google wuxuu shaqeeyaa waqtiga oo dhan. Ugu yaraan, weligii ma niyad jabin. Intaas waxaa sii dheer, boggu waa fayras-aan lahayn, bilaa lacag la'aan, iyo sahlan in la isticmaalo. Dhammaadka maalinta, taasi waa waxa dhabta ah.
Ammaan ah inaad isticmaasho generator!
Hase ahaatee, boggu ma haystaan ​​kaarka aqrista hadiyaddu ilaa aad ka saarto macluumaadkaaga gaarka ah. Sidaa darteed, uma baahnid inaad soo bandhigto macluumaadka shakhsiyeed, dhaqaale, ama awoowe awoowe si loo helo codsiyada Google oo aan lacag la'aan ah koronto-dhaliye. Sidaas darteed, haddii ay jiraan waxyaabo badan oo laga yaabo in ay adagtahay in la xakameynayo, wax khasaari maysid. Taas oo la yiraahdo, waxaan ku darsan karnaa xaqiiqda taas Gaariga code-yada Google wuxuu u shaqeeyaa sida orodka - macluumaad gabagabo ah oo la xaqiijiyay ka dib baaritaano badan iyo dib u eegis guud. Xaqiiqdii, koronto-dhaliyuhu wuxuu u shaqeeyaa sida bahal. Si aan ula yaabno, koronto-dhaliyuhu wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro tiro badan oo ka mid ah kaarka lacag-bixinta Google-ka oo bilaash ah. Sidaasi darteed, waxaa jiri doona wax kasta oo ka baxsan halkaa xitaa haddii goobta ay tahay inay fayruska ku dhacdo. Marka lacagtu ka baxayso su'aasha, dadku waxay u qulqulayaan goobta si lacag la'aan ah. Ka dib oo dhan, dhammaanteen waan jecel nahay alaab lacag la'aan ah. Sidaas darteed, waxay bixisaa 'go-getter' halkan si aad ugu raaxaysato kaarka hadiyadeed ee bilaash ah.
Qayb wayn oo aad adiga ku guursateen!
Marka la eego khadka moolka ee bogga Calaamadaha gawaarida Google halkaasna, ma noqon doonto wax la yaab leh haddii website-ka uu u qaato sida ruxi uu udiyaar garoobo hawsha banaan. Ka dib oo dhan, way adag tahay in la helo dhab ah Gaariga code-yada Google ee da'da iyo wakhtiga maanta. Xitaa haddii aad samayso buug-buugaagta-buugaagta qiimaha cilmi-baarista ee shabakada, waxaa laga yaabaa inay caddeyn u tahay hawsha jahannamada si loo daboolo wax sharci ah oo bilaash ah. Si daacad ah u hadlaya, tani waa jener-yada kaliya ee aan u isticmaaleynay muddo ah inaan soo saarno kaararka hadiyado ee bilaashka ah ee Google, mana jiraan wax ammaan ah oo aan u hayno horumarinta goobta. Tani codsiyada Google oo aan lacag la'aan ah Jeneraalku waa runtii bam. Waa wax cajiib ah oo aan helnay nolosheena maalinlaha ah.
69 Comments ON " Kaarka lacag-bixinta ee google-ga bilaash ah "
Aljan Nofeembar 28, 2017 at 7: 51 pm - Reply
Wow shaqaalaheeda. Waxay u dhowdahay guys ka hor intaanay helin wax horumarin ah
mohammedkhadeer Janaayo 19, 2018 at 4: 28 pm - Reply
vegetasj3 Nofeembar 28, 2017 at 7: 53 pm - Reply
Waad ku mahadsan tahay inta badan qadarinta casharka
vigo Nofeembar 30, 2017 at 3: 40 pm - Reply
Qaado my 100 $ qiimo u qalma hadiyadaha:]]]
Gaurav ghouri December 27, 2017 at 2: 16 pm - Reply
Fadlan bixi akoontigayga 50 $ oo aad bixisay kadibna waan ku farxi doonaa
Bob December 1, 2017 at 6: 36 AM - Reply
Waxay u shaqeysay
lmao777 December 3, 2017 at 9: 23 AM - Reply
Sameynta isku dayga koowaad
Winny December 8, 2017 at 2: 16 pm - Reply
Masiix December 14, 2017 at 7: 31 AM - Reply
Dony December 20, 2017 at 7: 16 pm - Reply
CyCling December 23, 2017 at 10: 37 AM - Reply
Guys waxaan ubaahanahay caawin
CyCling December 23, 2017 at 10: 40 AM - Reply
ka dhigay lol
BMW December 29, 2017 at 7: 50 AM - Reply
Xuduudaha kaadhka deeqda ah ee 3 oo kaliya, oo aan helay qalabkan leewl
QWERTY Janaayo 3, 2018 at 7: 35 AM - Reply
<3 jecel yahay
Cryptic Janaayo 11, 2018 at 6: 13 AM - Reply
Ma waxaan jeclaan lahaa kaarka deeqda ah ee 50-100 mahadsanid email
Balraj Janaayo 13, 2018 at 3: 49 AM - Reply
Waxaan ubaahanahay kaarka deeqda ah ee 50
Dennis Green Janaayo 15, 2018 at 4: 32 pm - Reply
Qofku ma caawin karaa wax walba oo ay ku yiraahdo waa miisaan xad dhaaf ah
Flerry Janaayo 15, 2018 at 4: 34 pm - Reply
Waxaan ubaahanahay kaar aqoonsi 50 $ caawin kara
Drogo Janaayo 17, 2018 at 7: 36 AM - Reply
Qodobka ugu wanaagsan ee aan helay
Kaaleeb Janaayo 21, 2018 at 2: 34 pm - Reply
Fadlan ma ii abuuri kartaa $ 50 oo ah kaararka ciyaarta Google
Kaaleeb Janaayo 21, 2018 at 2: 35 pm - Reply
Fadlan ma ii abuuri kartaa kaarka kubadda ciyaaraha ee Google 50
Wiil wanaagsan Febraayo 9, 2018 at 8: 24 AM - Reply
Tiny Janaayo 22, 2018 at 6: 40 AM - Reply
Waxaad tahay nin geat ah
spongebob01 Janaayo 28, 2018 at 10: 50 AM - Reply
Halkaas u soco
Mario Febraayo 15, 2018 at 12: 59 AM - Reply
Alan Febraayo 16, 2018 at 2: 38 pm - Reply
Waxaa weli ka shaqeeya?
Gwyneth Cozy Febraayo 17, 2018 at 1: 08 pm - Reply
Bruh ayaa ii soo dirtay hadiyad
Jhon Febraayo 20, 2018 at 7: 36 pm - Reply
Waxaan u baahanahay kaarka kubbadda cagta ee Google 25 ama 50
Quduuska Quduuska ah Febraayo 22, 2018 at 1: 29 pm - Reply
Illuminati ayaa xaqiijiyay. Shaqeeya weyn !!
Shikto Febraayo 27, 2018 at 4: 59 AM - Reply
Waxaan rabaa kaarka lacag-bixinta ee 50 $ google-ka bilaash ah.
Ferdy Febraayo 27, 2018 at 11: 28 AM - Reply
Faisal Febraayo 28, 2018 at 6: 04 AM - Reply
Sanduuq Febraayo 28, 2018 at 3: 10 pm - Reply
Nabi Febraayo 28, 2018 at 6: 51 pm - Reply
Qof ayaa ii soo diraya kaar
D33er March 1, 2018 at 10: 36 AM - Reply
Aamir Maarso 20, 2018 at 1: 11 pm - Reply
Jirka ayaa iga caawiya fadlan
Hitesh Maarso 20, 2018 at 4: 48 pm - Reply
Waxaan rabaa kaarka deeqda ee 50 $
Shaqaalaha Maarso 22, 2018 at 7: 08 pm - Reply
Waxaa soo shaqeeyay !!!
England Abriil 12, 2018 at 6: 32 AM - Reply
Miisaankayga waxaa buuxiyey: px
Tony Abriil 26, 2018 at 4: 58 pm - Reply
Trunks91 May 3, 2018 at 5: 37 AM - Reply
Arjuna May 9, 2018 at 5: 06 AM - Reply
Dyy May 10, 2018 at 3: 27 AM - Reply
Bwana May 10, 2018 at 12: 34 pm - Reply
Xeerarka waa run iyo shaqeyn, waxaan jeclaan lahaa oo kaliya waan ogaa 😀
Bill May 24, 2018 at 1: 34 pm - Reply
Waa maxay hannaanka, wadaagista daryeelka
ahalasa May 17, 2018 at 7: 12 pm - Reply
remi1 May 31, 2018 at 1: 56 pm - Reply
Laga soo furtay codsiyada 2 lol: p
123456 July 5, 2018 at 10: 36 AM - Reply
Mid ka mid ah walaalkay yar, wuxuu hadda aad u faraxsan yahay (y)
Sukyto July 22, 2018 at 11: 33 AM - Reply
Wali waa shaqeeyayaasha
Takato11 August 2, 2018 at 7: 50 AM - Reply
Waxaad tahay geesigkeyga <3
John September 7, 2018 at 5: 24 AM - Reply
aaaaaaa September 14, 2018 at 2: 02 pm - Reply
Waan la yaabay in wali ay shaqeyso
Qashinka Xaydhka September 20, 2018 at 7: 30 AM - Reply
Lacagta 50 $ code, waxay u isticmaali doontaa pubg
camo September 27, 2018 at 7: 48 AM - Reply
nin wax barasho wanaagsan
trev0rrr Oktoobar 4, 2018 at 8: 00 AM - Reply
istiraatiiji Oktoobar 11, 2018 at 8: 17 AM - Reply
waxay heshay dhowr lambar oo maanta ah, iyagoo aadaya iyaga oo ku iibinaya v bucks!
Aqbasho Oktoobar 25, 2018 at 1: 18 AM - Reply
Fadlan i sii iwo 50 $ google play card Waad ku mahadsan tahay
KOOLMAN Oktoobar 25, 2018 at 9: 46 AM - Reply
Tani waa soooo coool!
Dallas Nofeembar 15, 2018 at 11: 36 AM - Reply
Mario Nofeembar 22, 2018 at 8: 45 AM - Reply
Trocko December 13, 2018 at 8: 54 AM - Reply
Akraktor December 20, 2018 at 8: 52 AM - Reply
Lo'da Quduuska ah
Dino Janaayo 3, 2019 at 12: 11 pm - Reply
nikkel Janaayo 17, 2019 at 3: 19 pm - Reply
Mino Febraayo 7, 2019 at 4: 29 pm - Reply
Tani waa sooji cool
Max Febraayo 21, 2019 at 6: 29 pm - Reply
tr Maarso 7, 2019 at 2: 58 pm - Reply
duufaan Febraayo 28, 2019 at 4: 53 pm - Reply
Igu salaama jidadkiinna
arc May 2, 2019 at 9: 35 AM - Reply